अनुहारको दाग हटाउनको लागी प्रयोग गर्नुस् यस्ता घरेलु उपाए,जसले तपाईको दागलाई १० दिनमै निको गर्छ | No.1 Nepali News
Home जीवनशैली अनुहारको दाग हटाउनको लागी प्रयोग गर्नुस् यस्ता घरेलु उपाए,जसले तपाईको दागलाई १०...
५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २३:३३
सुन्दरता मानिसको गहना हो । सबै मानिसहरुमा सुन्दर हुने चाहना हुन्छ । तर अनुहारमा विभिन्न प्रकारका चाँया र पोतो आउने कारणले गर्दा सबै दुखी हुन्छन् ।
चाँया र पोतो हटाउनको लागी मानिसहरु निकै पैसा खर्च गर्छन् । तर घरेलु उपाए अपनाएको खण्डमा छिट्टै चाँया हटने गर्दछ । कसरी चाँया हटाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा आज बताउन गईरहेका छौं ।
चन्दनको धुलोलाई बेसारमा मिसाउने र त्यसमा बदाम,कागतीको रस हालि राम्ररी घोल्ने र लेप बनाउने । बनाईसकेको लेपलाई दश दिनसँम निरन्तर लगाईरहेको खण्डमा तपाईको अनुहारमा चमक देखा पर्दछ । चाँया तथा पोतो हटेर जान्छ ।
अन्य समाचार / काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ ।
Previous articleकसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्दैन ? जानि राखौ – डा. नुतन शर्मा
Next articleस्मरण क्षमता बढाउने प्रभावकारी काइदा, यी हुन् ८ तरिका
हाम्रो पुस्ता - ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २३:३३ 0
अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबाका चेयरम्यान ‘ज्याक मा’ एसियाका धनी व्यक्ति मानिन्छन् । आउनुहोस , उनका केही यस्ता भनाइबारे जानकारी दिँदैछौं । जसलाई फलो गरेर जो...